राम्रो ले्ख्नु भयो शेखर दादा। मनमोहन सिंह निश्चित रुपमा नेता भन्न लायक मान्छे हुन्। इमान्दारिता, निष्ठा र केही गरूँ भन्ने दृढ ईच्छाशक्ति भएका अर्का नेता सायद ओवामा हुन्।
शेखर जी मैले पनि जिब्रो टोक्ए उनले आफ्नो २००२ मा बनेको ८०० सि सि को मारुति कार को नबिकरण गर्न आँफै ड्राइभ गरी यातायात बिभाग जान्छन भन्दा । छिमेकमा यस्तो भए हाम्रोमा नि होला नि यस्तो कुनै दिन त।
शेखर जि राम्रो लेखको लागि धन्यवाद!
खोइ नेपाली जनताले कहिले पाउने हुन यि मनमोहना सिंह जस्ता नेता?
नेपालमा त जनता र राष्ट्र भन्दा कार्यकर्ता र पार्टिलाइ ठुलो ठान्छन यि नेता भनाउदा डाकाहँरु ।
राम्रो बक्तित्व लाई प्रस्तुत गर्नु भएको मा धन्यवाद //
काश हाम्रो देशमा पनि निस्वर्थी, नेपाली माटो लाई हिर्दय बाट सिच्न
मन भित्र बाट आफुलाई " नेपाली" भनेर गर्व गर्न रुचौने पवित्र
बिचार को नेता चहिये को छ /
जुन गोरु आए पनि कान चिरेका ले साह्रै दिक्क लागेको छ /
कतै आफुलाई नेपाली हू भनेर गर्व न गर्न पाउने होला कि
भनेर चिन्ता लागि रहेछ /
हामीसबैमिली केही गर्नु पर्‍यो हाम्रो सर्भौम्सता जोगाउन /
शेखरजीले दर्साए जस्तै भिम काय भौगोलिकता, बिबिध भाषा र संस्कृतिको बाबजुद मिलीजुली सरकार टिकाउन सक्नु चानचुने कुरा होइन। यत्ती सिके पनि हुन्थ्यो नेपाली नेताहरुले।
सरकार छ मिलीजुली, निर्णय छ आफ्नो मात्र। अनि टिक्छ त सरकार। फेरि काम पनि मनपरी। यस्तो काम गरुन कि जनताले पनि साथ दिउन। कुनै जिल्लामा पुल बनाएको भए कसैले बिरोध गर्थे? उनिहरुला त बिगार्न भत्काउन मात्र आउंछ। खासमा भन्नु पर्दा माओबादी सरकार कर्माचारी राजनितीमा मात्र सिमीत रहेर पञ्चायत भन्दा पनि गनाएर गयो।